Soomaalida cuuryaanka ah oo dhibaato ku qabta Sweden | Somaliska
Dadka cuuryaanka ah ayaa guud ahaan dhibaato ku qaba xiriirka Hay’adaha dowlada Sweden sida ay wariysay idaacada Sweden, iyadoo qaasatan Soomaalida la sheegay in ay si gooni ah dhibaato u haysato. Dhibaatadaas ayaa lagu tilmaamay dhinaca luuqada iyo dadka oo aan fahansanayn sida ay u shaqeeyaan hay’adaha dowlada Sweden. Xiriirka dhaqaatiirta iyo Hay’ada caymiska (Försäkringskassan) ayaa qaasatan dhibaato ka haysataa Soomaalida.
Inkastoo aan wada ognahay in guud ahaan Soomaalida dhib ku qabaan dhinaca luuqada, ayaa la fahmi karaa in dadka cuuryaanka ah oo u baahan daryeel gooni ah ay la soo daristo dhibaato. Sababta ay idaacadu u baahisay in Soomaalida dhibaato gooni ah haysato ayaa ku salaysan wareysi ay la yeesheen shaqsiyaad Soomaali ah balse kuma dhisna cilmi baaris. Hada ayaan ognahay in tirada Soomaalida ku cusub Sweden ay hoos u dhacday isla markaana ay soo bateen qowmiyadaha kale, kuwaasoo aan filayo in iyaga xitaa dhibaato haysato.
Si kasta ha ahaatee, qofka cuuryaanka ku ah Sweden ayaa la dhihi karaa waa mid haysta fursad weyn marka loo barbar dhigo cuuryaanka ku nool Somalia oo xitaa aan heli karin gaariga cuuryaanka. Iyadoo wadankaan cuuryaanka loo sameeyay adeegyo wanaagsan oo nolosha loogu fududaynayo.
jimcaale waa sax war kaaga lkin waxan aamin sanahay in ey ku xiran tahay qofka fir fir coonidiisa maxaa yeelay qofka waxuu heli karaa turjubaan balse soomaali hadii aan nahay runta meesha an ka heli karno maba raadino ee dhexdeena ayaan iska wareysanaa